သီတဂူဆရာတော်ကြီးသည် သီတဂူသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို အင်အားကောင်းစေရန် သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့ကို သာသနာနှစ် ၂၅၂၄နှစ်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၄၂နှစ်ခုနှစ်၊ ခရစ်နှစ် ၁၉၈၀ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ သီတဂူဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် အထက်မြန်မာပြည်၊ အောက်မြန်မာပြည်၊ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကနေဒါစသော နိုင်ငံတို့နှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ သီတဂူသံဃာ့၀န်ဆောင်အဖွဲ့၊ သီတဂူကပ္ပိယကာရကအဖွဲ့များနှင့် သီတဂူအလှူရှင်များတို့ကို ပါ၀င်စေလျှက် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ကြီးဖြစ်သည်။
သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးက သာသနာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးစတဲ့ အရေးများစွာတို့ကို အင်တိုက်အားတိုက် ပြုလုပ်လာခဲ့ရာ--------
၁။ သီတဂူရေအလှူတော် စီမံကိန်း
၂။ သီတဂူဆေးရုံတော်များ စီမံကိန်း (မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား)
၃။ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ စီမံကိန်း (စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ရန်ကုန်)
၄။ သီတဂူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀ိပဿနာ အကယ်ဒမီ စီမံကိန်း (စစ်ကိုင်း)
၅။ သီတဂူဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ၊ သီတဂူဓမ္မ၀ိဟာရ၊ သီတဂူသံဃာ့၀ိဟာရ (ပြည်တွင်းပြည်ပ) စီမံကိန်း
၆။ သီတဂူ ပညာရေးထောက်ပံ့မှု စီမံကိန်း (ပြည်ပပညာတော်သင်နှင့် ဆေးကျောင်းသားများ)
၇။ သီတဂူ ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့မှုစီမံကိန်း (မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား)
၈။ သီတဂူ အထွေထွေလူမှုရေးစီမံကိန်း (မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည့် နာဂစ်လေမုန်တိုင်းကဲ့သို့ သဘာ၀ဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေး စီမံကိန်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာကဲ့သို့
ပြည်ပတွင် ဒုက္ခရောက်နေကြသော တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများကယ်ဆယ်ရေး စီမံကိန်း) စတဲ့ စီမံကိန်းများစွာကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Most Venerable Sitagu Sayadaw Dr. Ashin Nyanissara established the SIBMA in 1980 (2524, B.E/ 1324 M.E) withaview to accelerating his missionary and social works with the inclusiveness of pious devotees at home and abroad. The SIBMA is formed with the devotees from lower and upper Myanmar and those from U.S.A, U.K, Singapore, Malaysia, Thailand and Canada. It also includes Sitagu presiding monks, members of Sitagu supporting groups and donors.
Since its establishment, The SIBMA has exerted relentless efforts in engaging in its assistance and support in the fields of religion, education and health and other social works. So far, the SIBMA has successfully accomplished the following projects.
Sitagu Water Project in Saging Hills
Sitagu Hospitals Construction Project across the country
Sitagu Buddhist Universities (Sagaing, Yangon and Mandalay)
Sitagu Vippasana Academy (Sagaing)
Sitagu Buddha Vihara, Dhamma Vihara and Sangha Vihara (at home and abroad)
Sitagu education aid program (for Myanmar students pursuing further students in broad and for local medical students)
Sitagu health care program (at length and breadth of the country)
Sitagu general social works project (relief and rehabilitation works
for the victims of natural disasters like Nargis and return of Myanmar nationals suffering hardships in Malaysia and Srilanka)
May you all be happy, healthy and peaceful!